ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: အပျိုကြီး ဆိုတာလေ...
နိုးနိုး | 12:27 PM | ဆောင်းပါး
နိုးနိုး | 12:27 PM |
၀ါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်လည်းရောက်တော့မယ်.. နိူဝင်ဘာလ ကုန်မှာ ဆင်နွှဲရမယ့် ညီမလေး ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ အတွက် လုံးပန်းနေတဲ့ ကျွန်မ ကိုတွေ့ တဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတိုင်း က ဘယ်တော့ စားရမလဲ အပျိုကြီး.. သီတင်းကျွတ်တော့မယ် လို့ လှမ်းမေး ပြီး နောက်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာမှ တိုက်ဆိုင်ချင်တော့လည်း မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ဆရာမဆုမြတ်မွန်မွန် ရေးတဲ့ကျွန်မတို့ အားလုံး ထမင်းမစားကြသေး ပါ ဆို တဲ့ စာ တစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဆရာမ က သူ အပါဝင် အပျိုကြီး သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း ပြီးတော့.. ရှိရှိသမျှ အပျိုကြီး တွေ ကို ရည်ညွှန်း ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ စာလေး ပေါ့ရှင်။
ခုလဲ.. ဒီလို မေးခွန်းတွေ အမေးခံနေရတဲ့ ကျွန်မတို့ အပျိုကြီး တွေ ကလည်း ထမင်းမစားကြသေးပါလို့ ပြန်ဖြေရမလို ပါဘဲ။ ဆရာမ က ရေးထားတယ်လေ..။တွေ့ လို့နှုတ်ဆက်မယ်ဆို.. မနက်.. ၉ နာရီ နဲ့ .. ညနေ ၇ နာရီနောက်ပိုင်း မှာ.. ထမင်းစားပြီး ပြီလား လို့ .. မမေးတတ်ကြပါဘူးတဲ့..။ ထမင်းစားချိန် အတွင်း.. မနက် ၁၁ နာရီ နဲ့ ညနေ ၅နာရီ ကနေ.. ၇နာရီ အတွင်းသာ.. မေးကြတာပါတဲ့..။ ခုလဲ.. သီတင်းကျွတ်ကာလ မို့သာ မေးတတ်တာမို့ … အဲဒီလို သဘောပါတဲ့ ရှင်။ အတိုချုပ်ပြီး ပြောပြတာပါနော်..။
သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ က ၂၀ ကျော် အစိတ်ပိုင်း အရွယ်တော် တဆိတ်ဟိုင်း ပါတဲ့..။ ကျွန်မတို့ လို.. ၃၀ ကျော်.. ဆိုရင်.. ဘယ်လို များ ခေါ်ရပါလိမ့်.. စဉ်းစားနေမိတော့တယ်။ အပျိုကြီး တွေ များဆို တချို့အမြင်ကပ်စရာ ကောင်း အောင် ကို စနောက်တတ်ကြသေးတယ်။ အပျိုကြီး ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲ လို့ စဉ်းစား မိရင်တော့… တော်တော် အတွေးရခက်တာပဲ..။
ရတာ မလို လိုတာ မရ လို့ လည်း မညှာမတာ ပြောတတ်ကြသေးတယ်နော်။ ဒါ ကလူတစ်ယောက် ရဲ့ ခံစားချက် ပြီးတော့.. အချိန်… နောက်ဆုံးတော့ ဖူးစာရေးနတ် နဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့ ရှင်။
လူတိုင်း ချစ်သူထားတတ်ကြတာပါပဲ..။ ကျွန်မလည်း ရှိခဲ့ဖူးတာပဲ..။ အချိန်မကျလို့ .. အိမ်ထောင် မပြု ဖြစ်သလို .. နဖူးစာ မင်ရည်ကျဲ လို့ ကွဲတဲ့ နောက် မှာ တော့… အချစ်သစ် တွေ့ ဖို့ မတွေ့ ဖို့ ဆိုတာ.. အခြေနေ အမျိုးမျိုး ပေါ်မူတည်မယ် လို့ ထင်မိပါရဲ့ နော်..။
တချို့ ကတော့.. တကယ်ကို တစ်သက်မှာ တစ်ယောက် ချစ်ပြီး အဲဒီ တစ်ယောက် ကို လွမ်း လို့ .. အပျိုကြီး ဖြစ်တာ လည်း ရှိမှာပေါ့လေ..။ တချို့ ကျတော့လည်း.. ဘ၀မှာ တခါမှ ကို မချစ်တတ်တဲ့ သူ..။ တချို့ ကျတော့ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် အပျို ကြီး ဖြစ်နေသောသူ. စသဖြင့် ပေါ့လေ..။
ကျွန်မ တို့ အပျိုကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း အများစုက အလုပ်လုပ်နေကြတာ များတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းတက်နေကြတာပေါ့။ ကျောင်းတက် လိုက် စာကျက်လိုက် အလုပ်လုပ်လိုက်ဆို တော့လည်း အချစ် ကို ရှာ ဖို့ အ ချိန်မရှိဘူးလေ။ အချိန်ပေး ပြီး အချစ် ကို မခံစားတတ် သလောက်ပါပဲ ပေါ့...။ လူကြီး တစ်ယောက် ပြောဖူးသလို... ကျောင်းတက်.. အလုပ်လုပ်.. ပိုက်ဆံရှာ .. အချိန်လေး နည်းနည်း ပိုလို့ ဘေး နား ကြည့်လိုက်တော့.. ကိုယ်လိုသူလို အပျိုကြီး တွေ ပဲ ရှိတော့တယ်တဲ့...။ ဒီ အသက်ရွယ်ရမှလည်း ကိုယ် ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်နေရာ မှာ.. ဘယ်သူ့ ကို မှ ခွဲ မပေးနိုင်ဘဲ အတ္တတွေ သိပ်ကြီး ပြီး ဘုရင်မသာ လုပ်ချင်တော့တာ ပဲရှင့်။
ပြန်တွေးကြည့်ရင်.. ကျွန်မတို့ မှာ အားသာချက်တွေလည်း အများကြီးပါရှင်…။ ဟော ကြည့်လေ… အိမ်ထောင့်တာဝန် ထမ်းနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် သူငယ်ချင်းမတွေ ထက် ကျွန်မတို့ မှာ လွတ်လပ်မှု က ပြည့်လို့ …။ ဈေးပတ်မလား လာ ထား အေးဆေး..။ ကော်ဖီ ဆိုင် ထိုင် မလား.. လုပ်လိုက်လေ… ဘယ်ဆိုင် မှာ ထိုင်မလဲ.. ။ ကိုယ်ရှာတဲ့ပိုက်ဆံ.. မေမေ့အကုန် အပ်လို့ .. ဘယ်သူ မျက်နှာ မှ ကြည့်နေ စရာ မလို…။ အလှပြင်ဆိုင်သွား.. ကိုယ့် ပိုက်ဆံ ကိုယ်ဖြုန်း တာ.. ဘယ် လောက် ကုန်ကုန် .. ကိစ္စမရှိ… ။ ကလေး နေမကောင်း လို့ စိတ်ပူ ဖို့ မလို… အိမ်ဦးနတ် ဆိုတဲ့ ကိုကို ယောက်ျား တွေ ကို ပြုစု ယုယခရာ နေဖို့ မလို… ကလေး ကို စာသင်စရာ မလို…. ဟုတ်တယ် ဟုတ်..။
မြင်ဘူး သမျှ ကိုကို အိမ်ဦးနတ်တွေ က .. ကျွန်မ ဖေဖေ၊ အကို မောင် တွေ အပါအ၀င် နော်... မေကြီး ရေ ဆို.. လူရော.. ရေ ရော ရောက်မှ ကြိုက်တတ်တာမျိုး၊ တခါလေများ.. ရေ လို့ သာ ပြောတယ်..က်ုယ် က ရေအေးယူလာရင် သူ က ရေနွေး မှ သောက် ချင်တာတဲ့ က ပါသေး။ ကိုယ် က နေမကောင်းလို့ .. ဆေးတိုက်ချင်တိုက်မှပေါ့... ဒီထက် မ ပိုနိုင်.. ဟော.. သူတို့ များ ဖြစ်ကြည့်. .. ကိုယ် က ရေပတ်တိုက်ရ.. ဆန်ပြုတ်ခွံ့ ရ....။
ကိုယ်သွားချင်ရာ.. လိုက်မယ့်.. ကိုယ်ပြောသမျှ ပြီးတဲ့… ကိုကိုယောက်ျား မျိုး ကို ရှားရှားပါးပါး ရထားရင်တော့ ကံ ကောင်းတာပေါ့လေ နော်..။ကိုးရီးယား ကား ထဲ ကလို များ.. ချစ်သူများနေ့ .. နှစ်ပတ်လည်နေ့ ... ဘာ နေ့ ညာ နေ့ တွေ ကို.. ပန်းစည်းတွေ.. လက်ဆောင်တွေ.. ပေးတတ်တဲ့.. အရမ်းချစ်ပြီး အရမ်း နားလည်တဲ့ သူ များ ရှိ ချင်လည်း ရှိမှာ ပါပဲလေ...။ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပေါ့...။
ကျွန်မ ကတော့ လောကကြီး ကနေတတ်ရင်ကျေနပ်စရာပဲ လို့ တွေး ရင်း ဘ၀ မှာ နေပျော်နေတာပဲ…။ မိဘ အိမ် မှာ တနေကုန် တနေခမ်း ထမင်းမေ့ ဟင်း မေ့ Facebook တက် နေရင်လည်း ဆူစရာ မရှိ.. မေမေ့ကိုမုန့် ဘိုး လက်ဖြန့် တောင်း ပြီး ဆံပင် ပေါင်းလိုက်.. ကြိုက်တဲ့ အရုပ်တွေ ကောက်ဝယ် လိုက်.. ပိုက်ဆံ ဖြုန်း လိုက် အားနာစရာမလို… အိမ်မှုကိစ္စ မသိလည်း ဖြစ်တယ်လေ… အဲဒီဘ၀ မှာ.. နေသားကျလို့ ပျော်နေပြီ..။ ခရီးသွားလိုက်.. အပျိုဖြန်း တူမလေးတွေ နဲ့ ရေကူး လိုက်… ပျော်စရာတွေ ဆိုတာ များမှများ….။
အပျိုကြီးတွေ များ တယ်လည်း ပစိပစပ်များ သကိုး။ နင် ဒါကြောင့် အပျိုကြီး ဖြစ်တာ ဆို ပြီး သြဘာပေးတာလည်း ခဏခဏ ခံရ ပါ့..။ မောင်တွေ အကိုတွေ ကိုယ်တိုင် ကကို အဲလို သြဘာ ပေးတတ်ကြတယ်။ သူတို့ မသိတာ က.. သူ တို့ ကို စိတ်ပူ ပင် မိလို့ကို အလိုလို အမေ့ နေရာ အစားဝင် ၀င် ယူရင်း ကနေ ကို ပွစိပွစိ ပြောတတ်လာတာ ပါနော်..။
ပြီးတော့ အသက်ပေါ့...။ ၃၀ ကျော် ဆိုတာ.. ချစ်သူ ရှိရင်တောင်.. ဘ၀ ကို တည်ဆောက် လို့ .. ကိုကို ရေ.. ချစ်တယ်.. အဟင့် အဟွင့် တွေ လုပ်မနေ အားတော့ ပဲ... ကိုယ့် ဘ၀ ကို ကိုယ် ချစ်တဲ့ သူ နဲ့ရပ်တည်ဖို့ .. ကြိုးစား နေကြတာကိုး။ အပျို ကြီးရယ် မှ မဟုတ်... ၃၀ ကျော်ရင်တော့ အနည်း အများ ဆိုသလို.. စကားများတတ်လာကြတာပါပဲ..။
အဲလို ပြောလို့ .. စကားကုန် အပျိုကြီး လုပ်မယ်လို့ .. မပြောဘူးနော်..။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ.. ဘာမှန်း မှ မသိတာ…။ မျက်စိလည် လမ်းမှား ပြီး ဒီ ပစိပစပ်များတဲ့ အပျိုကြီး က လည်း တစ်ယောက် ယောက် ကို.. ချစ်မိသွားရင်တော့လည်း.. အပျိုကြီး ဖြစ် တော့ဘူးပေါ့…လေ။
ခုထိတော့ ဒီ အပျိုကြီး လည်း ... ကိုယ့် ဘ၀ မှာ.. ကိုယ် ဘုရင်မလေး ဖြစ်နေတာ ကျေနပ်ရင်း.. လောကကြီး ရဲ့ သဘာဝ အလှတွေ ကို တစ်ဦးတည်း အမြင်ကပ်စွာ ခံစား ရင်း... လက်ရှိဘ၀ က ကိုယ့် နေရာ လေး မှာ ကျေနပ်နေရင်း... သီတင်းကျွတ်တော့မယ် ဘယ်တော့ စားရမလဲ ဆိုတဲ့ အမေးတွေ ကို... ကျွန်မတို့ထမင်း မစား ကြသေး ပါ လို့ .. ပျော်ပျော် ကြီး ပြန်ဖြေ နေဆဲ ပါရှင်...။
ကျွန်မ ချစ်ရပါသော အပျိုကြီး အားလုံး သို့ ....။
Posted by နိုးနိုး at 12:27 PM